Soo Iibso Antibiyootikada oo aan dhakhtar qorin ugu yaraan $ 3 [Kaliya Hal Guji]
Soo iibso Amoxycillin
Waa maxay antibiyootiko?
Antibiyootikada waxaa la soo saaray 1940-yadii. Cuduro badan, sida oof wareenka, qaaxada, cudurada dhagaha iyo kuwa kale, ayaa lagu xakameynayaa iyadoo la adeegsanayo antibiyootiko. Antibiyootikada ayaa si xulasho leh u disha bakteeriyada kala duwan iyadoon waxyeello u geysan unugyada martida loo yahay ee caafimaadka qaba.
Waxaa jira noocyo badan oo antibiyootiko ah. Way ku kala duwan yihiin adeegsiga iyo habka loo gaaro himilooyinkooda. Antibiyootiggu waa hub casri ah oo bayooloji ah oo lagula dagaallamo bakteeriyada, fungus iyo noolaha kale ee yar yar ee saameeya caafimaadka dadka. Antibiyootiggii ugu horreeyay ayaa la helay qarnigii 20aad. Marka, khibrada aan u leenahay antibiyootikada wali waxay ku jirtaa marxaladihii ay abuurtay. Waa hub siyaabo kala duwan u weerara bakteeriyada. Antibiyootigyada qaarkood waxay bakteeriyada ka baabi'iyaan gudaha iyaga oo khalkhal geliya howlaha gaarka ah ee gudaha. Qaar kale waxay isticmaalaan xoog caayaan si ay u dilaan bakteeriyada. Labada noocba runti wax bay ka tari karaan bakteeriyada.
Noocee ah antibiyootiko ayaa jira?
Halkaas waxaad ka heli kartaa noocyo badan oo antibiyootiko ah. Waxaa loo kala saaraa iyadoo loo eegayo ujeedadooda, sumcadooda iyo adeegsigooda guud. Liiskani waa si kasta oo aan loo dhammaystirin. Noocyo badan oo cusub oo aan muhiim ahayn oo ka mid ah antibiyootikada ayaa la helaa maalin kasta.
Antibiyootikada 'Aminoglycoside' waxay joojisaa bakteeriyada gram-taban qaarkood si ay u soo saarto borotiinno. Waa la liqi karaa ama waxaa lagu qaadan karaa cirbad. Way fiicantahay inaad liqdo maxaa yeelay jirkaaga wuxuu haystaa waqti ku filan oo uu kula qabsado. Bakteeriyada waxay ku horumarin kartaa iska caabin aminoglycosides.
Waxay badanaa keenaan falcelin xasaasiyadeed oo yar yar oo naadir ah marka la barbar dhigo antibiyootikada kale sida cephalosporins iyo penicillins. Waxay ugu fiican yihiin daaweynta xubinta taranka, mareenka caloosha iyo cudurada ku dhaca habdhiska neef mareenka. Saameyntooda ugu caansan waa cuncunka caloosha.
Cephalosporins waxaa loo qaybiyaa 3 fac. Waa sida warshadaha kombuyuutarka. Jiil kastaa wuu ka cabsi badan yahay daaweynta bakteeriyada.Waxay la xiriiraan penicilins. Adeegsigooda ugu weyni waa daaweynta oof-wareenka, boronkiitada, noocyo ka mid ah infekshinka maqaarka, dhuunta cuncunka iyo infekshinka staph.
Fluoroquinolones waa antibiyootig guud. Waxay ka shaqeeyaan ciribtirka noocyo badan oo bakteeriyo ah. Mararka qaarkood waxay soo saaraan waxyeelo sida calool xanuun, shuban, matag iyo lallabo. Dhibaatooyinkooda badanaa waa ku-meel-gaadh iyo khafiif.Waxay ka hortagaan in bakteeriyadu taranto iyadoo la faragelinayo awoodda bakteeriyadu u leedahay inay soo saarto DNA.
Tani waa tii ugu horreysay ee antibiyootiko ah. Waxaa ku ogaaday Alexander Fleming shil. Waxay daaweeyaan noocyada kala duwan ee infekshannada sida mareenka neef-mareenka, ilkaha, maqaarka iyo caabuqa dhegaha. Waxay jebiyaan darbiyada bakteeriyada. Sidaa darteed, bakteeriyada waa la dilaa.
Sidoo kale waa antibiyootig guud. Waxay ka hortagaan noocyo badan oo bakteeriya ah. Waxaa la helay dhammaadkii 40-meeyadii. Qaar ka mid ah isticmaalkooda ugu caansan waa: finanka, qandhada la arko, infekshinka kaadi mareenka, gawracatada, cudurada galmada lagu kala qaado iyo waxyaabo kale oo badan.
Xagee ka iibsan karaa antibiyootikada?
Mudnaanta farmasigeenu waa in la hubiyo kumanaan macaamiil ah oo caalami ah inay helaan helitaanka daawooyin raqiis ah oo tayada ugu fiican leh. Xaqiiqda farmashiyahan, waxaad ka iibsan kartaa antibiyootikada khadka tooska ah wakhti kasta oo aad dareento oo hubso in lagu siin doono antibiyootikada ugu fiican ee ay soo saaraan soo saarayaasha shatiga leh ee leh tayada ugu adag. Kooxdayada xirfadleyda ah waxay hubin doonaan in booqashadaada kasta oo aad ku timaaddo farmashiyahan ay tahay mid ammaan ah, raaxo leh oo aad u faa'iido badan, maxaa yeelay waxaad ku iibsan kartaa antibiyootiko raqiis ah qaddar kasta oo loo baahdo.
Miyaan ka iibsan karaa antibiyootikada qadka tooska ah?
Waxaan aaminsanahay inay macaamiisheenu xor u yihiin inay iyagu go’aansadaan inay jecel yihiin inay ka iibsadaan antibiyootikada qadka ama qaab kale, mana weydiisanayno warqad dhakhtar. Waxaad ka heli doontaa inay kugu habboon tahay inaad naga iibsato antibiyootiko jaban, waadna la yaabi doontaa qiimaha hooseeya ee aan bixinno. Sababta aan ugu soo bandhigi karno qiimayaasha sidaa u hooseeya ayaa ah inaan si toos ah ula shaqeyno soosaarka dhabta ah ee daawadaada, sidaa darteed waligaa ha bixin lacag dheeri ah daawadaada aad uga safreyso hal shirkad ilaa shirkad kale inta aysan ugu dambeyn imaan. Ku qanacsanaanta macaamiisheena waa mid aad muhiim noogu ah, taas oo ah sababta aan ula soconayno tayada alaabooyinka la bixiyo oo had iyo jeer ay u furan yihiin ra'yigaaga iyo soo-jeedimahaaga.
Waxa ugu weyn ee ku saabsan farmashiyaheena ayaa ah inaad halkaan ku joojin karto raadintaada, maxaa yeelay waxaad kaheleysaa dhamaan adeegyadii aad raadineysay isla goobta, waligoodna ha ubixin lacag ka badan daawooyinka antibiyootikada oo tayo sare leh. Ku adeegashada antibiyootigyada farmashiyaheena, waxaad had iyo jeer heli doontaa dawooyinka ugu tayada fiican iyo dhoofinta dhakhsaha badan, iyo sidoo kale dammaanad qaadka qarsoodiga oo buuxa iyo dabcan taageero macaamiil oo hufan. Waxaan marwalba ku faraxsanahay inaan kaa caawinno inaad xalliso wixii arrimo ah ee aad lahaan karto, markaa ha ka waaban ilbiriqsi oo booqo si aan antibiyootikada u helno hadda!
Dhammaanteen waxaan ka helnaa daawooyinka allopathic ka imanaya ama farmashiyaasha bulshada, laakiin weligaa miyaad rumaysatay inaad ka iibsato antibiyootikada internetka? Guud ahaan, antibiyootiggu waa qayb ka mid ah daawooyinka loo yaqaan 'allopathic medicine' waana kuwo dhakhso badan. Taasi waa sababta dhakhaatiirta caafimaadka badankood ay u qoraan antibiyootiko. Antibiyootikada ayaa sida caadiga ah dhakhtarradu u qoraan sababta oo ah saameynteeda dhakhsaha leh ee daaweynta ee ka duwan daawooyinka kale ee caadiga ah ee allopathic. Waxaan ka warqabnaa in antibiyootigyadu ay yihiin kuwo qiimahoodu sarreeyo oo laga helo farmashiyeyaasha maxalliga ah, sidaa darteed waa kuwan sababaha ugu waaweyn ee qofku u doorto inuu ka helo antibiyootikada khadka tooska ah halkii uu ka ahaan lahaa.